DIGAAGGA BRAHMA: MAXAA KEENA BEERALAYDA DIGAAGA EE DIGAAGA? - BEERAHA DIGAAGA
Maanta, digaagga lo'da ayaa ah hawl aad u caan ah.
Waxay kuu ogolaaneysaa inaad cuno marwalba cusub, dabiici ah, hilib iyo ukun nadiif ah.
Laakiin, haddii aan ka hadleyno digaagga digaaga Brahma, ka dibna waxay sidoo kale keenaysaa qanacsanaanta sheeko.
Dabcan, tani tan of digaagga noqon doonaa decoration of yard kasta oo shimbir ah.
Waxay had iyo jeer u kala soocaan midabada jilicsan, degenaansho, isku dheelitirnaansho, sharafnimo, dulqaad.
Sababtoo ah faa'iidooyinkaas, iyo sidoo kale awooddeeda iyo cabbirka ballaadhan, nooca digaagga ayaa ka helay noocyo kala duwan oo beeraleyda digaaga ah oo jecel.
Digaagga hilibka digaaga ee digaaga digaaga ayaa badanaa lagu qurxiyaa sida qurxinta ama ilaalinta hiddaha hiddaha.
Maxay yihiin sifooyinka ugu muhiimsan ee lafaha Pomfret?
Tani waa digaagga digaagga waxaa lagu riixey xulasho dheer iyo isgoysyada. Waxaa ka mid ah Malay iyo Cochinites, shakhsiyaadka ugu xooggan iyo kuwa ugu weyn ayaa la doortay, ka dib markii ay ka gudbeen. Kadibna waqti dheer ayaa la soo doortay "nafteeda."
Waxaa mudan in la ogaado in kuwan naxwaha ah ee asal ahaan ka soo jeeda, iyo Brahma ee maanta ay aad u kala duwan yihiin.
Dhowrkii la soo dhaafey, caanuhu waxay la qabsadeen sifooyinka hilibka. Miisaanka nool ee cirridku wuxuu gaari karaa ilaa 7 kiilogaraam, waxay caadi u ahayd dhalinyaradu inay si degdeg ah u koraan (da'da shan bilood oo ay miisaankoodu ahaa 3 kiiloogaraam iyo gaareen qaangaadh).
Waqti ka dib, tayada wax soo saarka ee noocan ah ee hen ayaa hoos u dhacay. Waxaad sharaxi kartaa dhamaan xulashada shahwada ee shimbiraha jiilka xiga ee loogu talagalay calaamadaha lagu qurxiyo, iyo tayada waxsoosaarka qiimo leh oo gebi ahaanba la dayacay.
Sidaa darteed, si tartiib ah shimbirta waxay bilaabeen inay soo iibsadaan qiimaha qurxinta.
Miisaanka nool ee roosters ee barta brahma caan ah ayaa gaari kara 4.5 kg. In kasta oo jaantuskan si dhib yar loo yiraahdo yaryar, laakiin wax walba waa la ogyahay marka la barbardhigo. Badanaa, caanahan ayaa iska leh jihada hilibka.
General calaamadaha dibadda shimbirahan sharaf leh maanta:
Digaagga Pomura ayaa ah mid ballaaran oo aad u kooban;
Madaxa waa yar yahay;
Comb waa mid yar, caleen, saddex-isku xigta, ma leh dhammaadka fiiqan;
Indhaha oo qoto dheer, qarsoodi ah qoto dheer oo qadhaadh ah, sababtoo ah tan, muuqaalka u muuqda madluun;
Midabka dhegta dhegaha waa casaan, qaabkuna waa mid sare;
Waxaa jira maqaarka maqaarka, oo lagu sameeyay dhareerka qoorta;
Qoorta waa dherer dhexdhexaad ah, oo leh dabeecad cajiib ah. Bilowga waxaa jiraa qallaf yar;
Foornada ballaaran ee ballaaran ayaa soo baxda;
Qadka qoorta-gadaashu wuxuu leeyahay muuqaalka lyre;
Jidhku wuxuu u muuqdaa mid aad u weyn;
Dhabarku waa ballaaran;
Dhuunta adhiga, gaaban;
Lugaha ka baxsan dibadda waa mid aad u adag, aad u xoog badan, weyn;
Boorashku waa mid adag, oo ka sii daraya jidhka;
Midabyo badan oo jilicsan oo jilicsan oo jilicsan.
Digaaggu way badan yihiin, wax yarna way ka gaaban yihiin lugaha, marka la barbardhigo qulqulka.
Waa maxay sababta ay daaqsinka digaaga u door bidaan in ay koraan brama digaag? Aynu ka hadalno mudnaanta
Waxaad u socotaa shimbiraha guurka ee aan weli la ogaan ciddii jilicsanayd: hilibka, lafaha, lakabyada, ama aad rabto in aad ku jilciso farxad ku dheelitiran, digaagaha Brahma waxay noqon kartaa ikhtiyaarka ugu haboon.
Waxay ku jirtaa caansaantan badi doorashooyinka beeralayda digaaga ee la isku daro: midabka quruxda badan leh, tayada hilibka ee hagaagsan, oo ay ugu wacantahay lafaha khafiifka ah, si sahlan u dhaqma gacmaha. Laakiin waxyaabihii ugu horreeyay ee hore.
Naqshadda noocaan ah ee caleemaha ayaa soo jiidata beeraleyda digaaga badan. Hore ayay digaagadani aan lahayn wax la yaab leh, waa wax aan macquul ahayn. Isku duwo waxay ku daraan booska xishoodka. Isla markaasna waxay ka qarinayaan sawirkaan. deganaan, shimbiraha dabacsan, si sahlan oo lagu kalsoonaan karo iyo shimbiraha qallafsan.
Faa'iidada ugu weyn ee digaagaha Brahma waa isbeddel aad u wanaagsan oo ku yimaada cimilada qabow.
Kor u kaca hilibka yar yar waxay noqon kartaa waxoogaa adag, laakiin shimbiraha qaangaarka ah ayaa si fiican u degan xaaladaha qaboobaha iyo qoyaanka. Tani waxay muujin kartaa kororka wax-soo-saarka ukumaha xilliga jiilaalka.
Dooxooyinka digaaga ayaa loo yaqaan beeralayda digaaga si ay u helaan miisaankooda wanaagsan - wuxuu gaari karaa 3-4 kiilo garaam. Mararka qaarkood miisaanka musqulaha waa mid aad u weyn oo ka hortagaya inay istaagaan si joogta ah.
Waa maxay cilladaha Brahma ee ka qarsoon quraankan aan caadiga ahayn?
Haddii aan ka hadalno cilladaha iyo dhibaatooyinka soo koraya this ee digaagga, ka dibna waa lagama maarmaan:
Inkasta oo ay tahay dareenka kalkaalinta sare ee sare, digaagga noocan ah laguma talinayo in loo isticmaalo sida digaag. Xilligan aan fiicnayn waxaa lagu sharaxay miisaanka weyn ee digaaga, wuxuu xakameyn karaa ukumaha. Tani waxay ka sii wanaagsan tahay in la isticmaalo isku darka ukunta ama digaagga yaryar ee loogu talagalay qashinka, maxaa yeelay waxay noqon karaan 1.5 kilo oo ka yar miisaanka Brahma.
Koritaanka dhaqdhaqaaqa digaagga. Hase yeeshee, si dhakhso ah uma koraan, laakiin si tartiib ah ayey u socdaan. Amnigooda waa qiyaastii 70%;
Xoolo aad u daciif ah oo lagu daray;
Fartaada aanad hubin, marka la barbar dhigo lugaha digaagga caadiga ah.
Waa maxay digaagaha Brahma?
Maanta, waxaa jira laba nooc oo Brahma ah: Yurub iyo Ameerika. In badan oo ku dhow Kokhinits waa nooca yurub, waxay leeyihiin xaraarad dheeri ah oo ay ku yar tahay marka la barbar dhigo nooca Ameerikaanka ah.
Markii dambe waxaa la caleemo saarey: Brahma waa mugdi iyo Brahma waa iftiin, ka dib markii Brahma oo dhan la soo dhejiyey.
Brama leh midab madow
Brahma mugdiga waxaa lagu gartaa iswaafajinta sare ee cimilada qabow ee qabow. Inta badan, nooca digaaga ah waxaa loo rijeynayaa sida ornamental. Calaamadaha waaweyn ee dibadda waa:
Gacan-ku-kicis lagu sameeyey;
duufaan, wejiga yar;
madaxa yar, yar yar;
godka ayaa loo qaybiyaa saddex godad;
beak gaajo leh jilicsan oo madow, xoogaa yar oo xoog leh, xoog leh;
lugaha baaluqay, dheer, dhumuc, huruud ah;
gaaban, gaduudan midabo casaan ah;
laabta oo ballaaran, oo ka sii ballaadhan noocyada kale ee Brahma,
maqaarka waa casaan iyo caddaan;
Dareemka qoorta iyo mane waxa uu leeyahay daboolka silvery, iyo dhexda qayba dheer. Midabka digaaggu wuxuu ku badan yahay midabka mugdiga ah, baal madow waxa lagu xardhay dhar cad, jidhkuna wuxuu leeyahay baal madow iyo safafyo madow.
Baahinta galmada ee Brahma gudcurku wuxuu yimaadaa 6-8 bilood jir. Muddadan, digaaggu wuxuu miisaankiisu kor u kaco ilaa 4 kiilo, iyo cirrid - ilaa 5 kiilo. Wax soo saarka ukunta waa qiyaastii 120-150 ukun. Miisaanka ukunta qiyaastii 70 garaam, midab khafiif ah - kareem.
Waxa kale oo xiiso leh in la akhriyo oo ku saabsan beerista ee berriga.
Mid ka mid ah noocyada taranka waa Brahma. Calaamadaha dibadda waa:
Daaqadaha sarreeya ayaa la soo saaraa, taas oo hubinaysa darnaanta aragtida;
Indhaha waa bunni casaan ah;
Madaxa ayaa u muuqda mid aad u yar marka la barbardhigo jirka;
Suulasha waa la taageeraa oo keliya dhexe iyo dibadda;
Lugaha waa jaalaha ah, qaro weyn, oo leh bakeer xoog leh ee dusha sare;
Cagaarshowgu wuxuu u qaybsamaa saddex xabbadood, midab leh;
Daboolku waa dherer dhexdhexaad ah;
Dhabarku waa gaaban yahay;
Qoorta waa qadar dheer.
Duufaantu waxay leeyihiin mug weyn oo ka sii madow midabka weyn. Miisaanka noolaanshaha da'da 8 bilood ayaa gaari kara 4-5 rodol. Chicken Brama oo leh midab khafiif ah ayaa inta badan la rijeynaya maahan sababta hilibka ama ukunta, laakiin waa sida qurxinta.
Wax soo saarka ukunta waa qiyaastii 130 ukumood sanadkiiba. Miisaanka nool ee ukunta waa 59 garaam. Maqaarka midabkeedu yahay midabka midabka leh.
Brama leh midab khafiif ah (ugu iftiimsan)
Brama-caleemo-brama ayaa badisay beeraleyda ugu badan digaaga iyada oo saameyn ku leh qurxinta. Noocan digaaggu waa midka ugu xasilan. Way fududahay in la riixo, waxaana sidoo kale loo barayaa in lagu quudiyo gacmaha, sababtoo ah waxay aad u kalsoon yihiin.
Xaaladda ugu weyn ee taranka Brahma leh midab khafiif ah waa socod joogto ah. Noocaan waxaa lagu gartaa habeyn wanaagsan oo jawi adag, oo qoyan. Isla mar ahaantaana, iyaga oo tarmaan ma aha sida fudud sida ay u muuqdaan.
Brahma cad ah ayaa la gaarsiiyaa 4.5 kiilogaraam 5-6 bilood waxayna bilaabaan inay jiifaan ukunta (qiyaastii 160-170 gambood sanadkiiba).
Qolku wuxuu leeyahay kareem leh midabo midab leh. Wax soo saarka ukunta ayaa kor u kaca inta lagu jiro bilaha jiilaalka. Tani waxay saldhig u tahay, xilliga qaboobaha, Brahma waa iftiin u baahan daryeel gaar ah.
Calaamadaha dibadda kuwani waa:
Madaxiisu waa yar yahay wejiga caanka ah ee yaryar;
Boorsooyinka dheeriga ah ayaa si wanaagsan loo horumariyey;
Gaga dhig hurdi waxay leedahay jilib madow;
Dhinaca midabka cas cas wuxuu u qaybsan yahay seddex sir;
Dhagta maqaarku waa weyn;
Indhaha qotoda dheer;
Kafaaradu waxay leeyihiin wareega saxda ah ee cabbirka dhexdhexaadka ah;
Qoorta ayaa si aan caadi ahayn u dheer, oo leh cadho cad oo horumarineed;
Baalashadu waa dhexdhexaad, oo ku xiran jidhka;
Dhabarku waa ballaaran, gaaban;
Dhar-beeleedka-qaabeeya-weyn oo weyn;
Lafaha khafiifka ah;
Maqaarka jaallaha ah;
Xabadku waa mid ballaaran, buuxa;
Si toos ah ayaa loo dhigay dhoow yar, oo ku fidsan dhinacyada;
Lugaha si adag u xiiray, qaro weyn;
Xoolo badan oo badan;
Lugaha tufaaxa waxay siiyaan nacfi si culus oo caddaalad u ah Brahma. Midabka noocaan ah waxaa badanaa lagu magacaabaa Colombian, sababtoo ah waxay ku jirtaa midabkeedu yahay lacag-caddaan ah, iyo sidoo kale nalka Brahma.
Marka lagu daro caanaha ugu weyn ee mugdiga ah ee digaagahan, baalasha iyo baalasha duulimaadka, iyo sidoo kale qoorta, ayaa lagu rinjiyey madow oo leh cagaar cagaaran. Baalalka xajka ah ee cirridku waa cadaanyo madow, halka digaaguna ay cad yihiin caddaan.
Inadmissible waa ubaxyada midabka huruudda ah ee baalasha, ama joogitaanka xayawaanka madow ee qaybaha lumbar ee cirridka.
Isku day inaad ku deg degto xilli dambe. Ukunta qoyan. Wax soo saarka ukunta ayaa kor u kaca inta lagu jiro bilaha jiilaalka. Wax soo saarka ukunta celcelis ahaan sanadkii qiyaastii 100-120 ukun. miisaanka hal ukun waa 50-60 grams.
Miisaanka nool ee hareeraha - 4 pounds, digaagga - 3 rodol.
Waxqabadka sarreeya ama hooseeya ee noocaan ah ee digaagga?
Beeralayii digaagga ee khibrad leh ee jecel inay u koraan lyaddan digaagga, iyada oo jawaabta su'aasha ah: "Waa maxay sababta ay u dhalatay brahma?" oo leh hal jawaab tooda: "Lacagta labanlaabka: ukunta iyo hilibka".
Digaagga ilaa laba sano waxay leeyihiin qiyaasta ukumaha sareeya - qiyaastii 120-150 ukumood sanadkiiba. Da'dan ka dib, wax soo saarka ukumaha ayaa si weyn loo yareeyey. Brahma waxay bilaabmaysaa in ay kudhaqaaqdo wax ka horeeya 7.5 ilaa 9 bilood. Miisaanka hal ukun waa 55-60 garaam.
Miisaanka nool ee digaagga ayaa ah mugdi madow illaa 4 kiilogaraam, khafiif yar oo yar - ilaa 3-3.5 kiilo garaam. Miisaanka nool ee roosters - ilaa 4-6 rodol. Qalab yar oo khafiif ah wuxuu ka hadlayaa tayada hilibka hilibka ee Brahma.
Badbaadada dhalinyarada - 70%, iyo shimbiraha dadka waaweyn - 90%
Xeerarka adag oo sahlan ee taranta taranka Brama
Dad badan, oo iibsanaya hen Brahma si ay u farxaan jimicsiga, mararka qaarkood ma fahamsan yahay in ay tahay "this aristocratic charm" kaas oo u baahan fiiro dheeraad ah.
Lama sheegi karo in daryeelka caafimaad ee Brahma uu si gaar ah u adag yahay, laakiin waxaa jira xeerar loo baahan yahay si looga dhigo mid haboon. Haddii aan la raacin, shimbiruhu waxay u badan tahay inay xanuunsadaan inta badan ma keenaan faa'ido.
Kala saarida digaagga: dhibaatooyinka iyo nuucyada ayaa la wajihi doonaa
Waxay yihiin koraan si tartiib ah iyo daryeelka aad u baahan iyo quudinta. Hatchability of digaagga ku dhowaad boqol boqolkiiba. Muuqaalka ugu muhiimsan ee xilliga kabuubintu waa kuleylaha oo si fiican u kululeynaya heerkulka aad u sarreeya. Tani waxay si gaar ah u tahay runta ka dib markaad ukumaha ku riddo inta lagu jiro 5-6 maalmood ee hore.
Isla markiiba ka dib markii digaagga digaagga lagu soo saaro wadada waa wax aan macquul ahayn. Waxaa lagugula talinayaa inaad u guurtid sanduuq caws ah, iyada oo la adeegsanayo iftiin iftiin leh, taasina waxay siin doontaa labadaba iftiinka iyo kuleylka.
Dhamaan asbuuc ka dib noloshii caanaha ah Brahma waa la soo saari karaa dhowr saacadood oo caws cagaaran ah, si ay u socdaan socodka qorraxda.
Maalmo badan kadib waxaa lagama maarmaan ah in la sameeyo shaqo ka hortag leh guurka. Cudurkoodu ma kala duwanaan cuduradaas oo ah digaagga caadiga ah ee jiran. Sidaa darteed, waa lagama maarmaan in la tallaalo digaagga, gaar ahaan shimbir shimbir.
Tani waa muhiim in la ogaado! Qeybtaani digaagga, dabeecadaha dabiiciga ahi si buuxda ayay u bilaabaan inay is muujiyaan sanadka labaad ee nolosha, sidaa daraadeed, ukumo waa in loo doortaa hindhistaha shimbiraha aan da'dooda ahayn. Iyo ukumaha sanadka ugu horeeya ee noloshu aad ayey uga yar tahay tan labaad.
Waa kuwee quudinta si fiican loo isticmaalo?
Fikradaha daaqsinka digaaga ee ku saabsan sida loo quudiyo digaagga ayaa kala qaybsan:
Qaarkood ayaa ku doodaya in ugu yaraan quudinta ugu weyn ee chamamura Bramah ay noqon doonto ballaarin gaar ah ee quudinta, oo keliya laga bilaabo laba bilood oo ah beddelka da'da lagu wareejiyo naas nuujinta.
Qaar kale waxay ku doodaan in marka hore ay ugu fiican tahay in la siiyo ukun la kariyey oo lagu darey sarreen ama hilibka hadhuudhka ah, marmarka qaarkoodna cawska ayaa la isku dari karaa.
Beeraleyda saddexaad ee digaaga ayaa ku kalsoon in cuntada ugu fiican ay noqon doonto dalag. In saamiga laba qaybood oo sarreen ah iyo saddexaad - galley. Corn waa suurad wacan in aan ku lug yeelan, sababtoo ah waxay keenaysaa in cayilka shimbiraha.
Nooc kasta oo aad quudinayso aad dooratay, waa inay ahaadaan ku-kordhin kala duwan, tusaale ahaan: miraha gabbaldayaha, cuntada, ukunta, iwm.
Quudinta iyo daryeellaha shimbiraha qaangaarka ah macnaheedu waa raacitaanka xeerarka hoos ku qoran.
Waxaanu sameynaa cuntada saxda ah ee digaaga Brama
Waa lagama maarmaan in la xoqdo hadhuudhka labadaba iyo dadka waawaynba, markaa si dhakhso ah ayuu u nuugi doonaa jirka.
Faa'iido u leh this ee digaagga ee digaagga waa cagaar cagaaran. Xilliga diiran, xayawaanku waa suurad wacan si loo daaqo. Xilliga jiilaalka, quudinta hay, iyo sidoo kale waxaa lagula talinayaa in lagu daro fennel qalalan iyo nettle si feed ah.
Waxaa la siiyey shimbiraha in qalinka, waxaa lagama maarmaan ah in la kormeero cuntada ugu dheellitiran. Waxaad ku dari kartaa biolit marka loo eego qiyaasta kiilogaraamka quudinta 1 qaado.
Marka daaqa Brahma lagu hayo waxaa jira cunto ay tahay in la tuuro, tusaale ahaan, laga bilaabo baradho la kariyey. Ma ahan mid aad u jilicsan, laakiin wuxuu bilaabaa inuu ku foorarsado caloosha shimbiraha, natiijada, dhalinyaradu waxay bilaabaan xanuunka.
Waa suurad wacan in la cuno si joogto ah u samee ciid webiga oo adag, ukunta jilicsan, qolofka, saliidda kalluunka, feeraha. Haddii ay suurtogal tahay, waa in la daro cunnooyinka soybean, waxaa ku jira 50% borotiin.
Haddii quudinta lagu dhajiyo dhulka korkiisa dhererka, jaranjarrooyinka yaryar waxaa loo keenay laba ama seddex talaabo, ka dibna hubi in digaagga ay sameeyaan jimicsi joogto ah iyo nadaafadda cuntada - ha ka ilaaliso inay ku qodaan nuujiyayaasha iyagoo leh boorsooyinkooda.
Ugu horreyn, waxaa lagama maarmaan ah in la kormeero nadiifinta dadka cabaya si aanay u daboolin caleemo iyo ubaxyo cagaaran. Haddii shimbiraha ay ku jiraan aviary - qashinka caadiga ah ee dabaasha waa inuu noqdo dambas. Sidaa darteed, shimbiraha ayaa ka saari doonaa dulin.
Bil kasta oo aad u baahan tahay daweynta hilibka doofaarka. Waxaad sidan u samayn kartaa sidan: ku shub saddex meelood oo shaashad shan litir oo leh saliid ama saliid si fiican loo dubay saliidda qorraxda iyo daaqada digaagga ee isku dhafkan.
Cirifka Brahma waa inuu gaar ka ah digaag caadiga ah. Geli qoobku waa inaanay ka sarrayn dhulka, ugu badnaan 40-50 sentimitir. Baaxadda qaansiirka waa inay noqotaa qiyaastii 30 sentimitir. Waa in lagu dhejiyaa saddex dhinac.
Guryaha kuwaas oo shimbirahan lagu hayo waa in si joogta ah loo duubaa, dabaqana waa in la nadiifiyaa oo nadiif ah. Si loo kordhiyo wax soo saarka ukunta, ka taxadar nalalka wanaagsan ee coop digaaga. Haddii aad ku hayso maalin iftiin ah 13-14 saacadood, markaa natiijo wanaagsan ma qaadan doonto muddo dheer.